I-ZTE Axon 10 Pro: Iinkcukacha, amaxabiso kunye nokwazisa ngokusesikweni | I-Androidsis
I-ZTE ayifuni ukuphoswa ngu-2019 we-MWC e-Barcelona. Kumsitho, uphawu lusishiyile nge-smartphone yalo entsha, iAxon 10 Pro.Yayisele ichaziwe kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo ukuba isixhobo yayizakuboniswa kwisakhelo se-MWC 2019, into eyenzekileyo ekugqibeleni. Esi sixhobo sikhethekile kwi-brand, kuba iba yeyokuqala kuluhlu lwayo ukufikelela kwintengiso nge5G.
Ukusukela ekuqaleni, uphawu lubonakalisile injongo yalo yokuba ngomnye woovulindlela kwi5G. Kunyaka ophelileyo babhengeza izicwangciso zabo zokuphehlelela iimodeli Ngale nkxaso kwintengiso. Eyokuqala kwezi fowuni ekugqibeleni isemthethweni. Ngenxa yokuba i-ZTE Axon 10 Pro sele iphakathi kwethu. Yintoni esinokuyilindela kwifowuni?
Njengazo zonke ii-smartphones ze5G ukuza kuthi ga ngoku, ngaphandle kweHuawei Mate X, isixhobo sifika kunye ne-Snapdragon 855 njengeprosesa yakho. Ke sinokulindela amandla amakhulu kuwe ngokubhekisele kwintsebenzo.
1 Ukucaciswa kweZTE Axon 10 Pro
Ukucaciswa kweZTE Axon 10 Pro
Ngokwendlela yoyilo, uphawu lwaseTshayina luzibophelele kwifayile ye- Isikrini esine-notch ekubunjweni kwethontsi lamanzi. Ke landela iindlela zentengiso kule meko, ngale Axon 10 Pro.Kwinqanaba lobuchwephesha liphezulu kuluhlu, apho uphawu luthemba ukubuyela kwimarike emva kweengxaki ezininzi ezibandezeleke ngo-2018 ngumqobo waseMelika.
Ukucaciswa kobuchwephesha ZTE Axon 10 Pro
Umzekelo I-Axon 10 Pro
Isikrini I-AMOLED 6.4 Inch HD epheleleyo
Ikhamera esemva I-48 MP + 20 MP (Wide) + umnxeba x5
Ikhamera yangaphambili 24 MP
Conectividad I-5G iBluetooth 5.0 WiFi 802.11 ac LTE
Ezinye izinto Umfundi weFingerprint odityaniswe kwiscreen
Ibhetri I-4.300 mAh ngentlawulo ekhawulezayo
Kule Axon 10 Pro yohlobo esilufumanayo I-Qualcomm Snapdragon 855 ngaphakathi. Isebenzisa imodem yeX24, ye4G esele iza ngokwendalo. Ngelixa iX50 inamathele kwibhodi yefowuni, ukuze isele inonxibelelwano lwe5G kuyo. Isixhobo sokuqala sophawu lwesiTshayina ukunika le nkxaso kubasebenzisi.
Kwi-GPU Adreno 640 ikhethwe kwisixhobo, evumela amandla amakhulu malunga noku. Ukongeza ekubeni ne-injini yobukrelekrele bokuzenzela evela kwiQualcomm. Kulindeleke ukuba ubukrelekrele bokufakelwa buya kubakho nakwikhamera yezixhobo, ke ziya kuphuculwa ngale ndlela.
Inzwa yeminwe yeminwe idityaniswe phantsi kwescreen, njengoko sibona kwiimodeli ezininzi ngaphakathi kwesiphelo esiphakamileyo ngoku kwi-Android. Ikwanokuvula ubuso, enkosi ngaphambili kwekhamera yesixhobo. Kwelinye icala, inkampani iazise eminye imisebenzi ephambili ngenxa yobukho bePie ye-Android, enjengebhetri efanelekileyo okanye ulawulo lomzimba.
I-ZTE Axon 10 Pro ifika nekhamera ngasemva kathathu. Iimpawu ezininzi kule MWC 2019 zisishiya neemodeli zekhamera engasemva kathathu, into ephindaphindwayo nophawu lwesiTshayina. Eyona iphambili yi-48 MP, ngelixa sinendawo engama-20 ye-MP ebanzi kwaye okwesithathu i-5x optical zoom, isisombululo sayo asaziwa okwangoku. Ukongeza, enkosi kubukrelekrele bokufakelwa siya kuba nemowudi yokukhanya, ukusondeza okubonakalayo, kunye nokubanjwa kokuhamba kwezi khamera.
Sifumana inguqulelo enye yesi siphelo siphezulu, ngokwe-RAM kunye nokugcinwa kwangaphakathi. Okwangoku, inkampani ayikasiniki umhla othile wokukhutshwa kwale ZTE Axon 10 Pro.Kuye kwathiwa izakufumaneka eYurophu. ngamanye amaxesha kwiinyanga ezintandathu zokuqala zonyaka. Izakufika ngoJuni, njengezinye iimodeli ze5G ezibonisiweyo.
Asinayo idatha kwixabiso uza kuba neflegi entsha ekufikeni kwayo ezivenkileni. Sinethemba lokuva okungakumbi malunga noku kunye nomhla wokukhutshwa kwayo kungekudala.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » ZTE » I-ZTE Axon 10 Pro: Ifowuni yokuqala yophawu ene5G